कुन हैसियतमा पुगिन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई स्वागत गर्न राष्ट्रपतिकी छोरी प्लेनसम्म ? – Etajakhabar
राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि पनि गल्तीहरु गर्दै आइरहेको छ । यसपटक पनि कार्यालयबाटै भएको गल्तीले गर्दा कतै भण्डारी आलोचित बनेकी त हैनिन् ? या उनलाई यसबारेमा जानकारी नै छैन ? छोरीसमेत लगेर प्रोटोकल तोडेको विषयलाई समेत जोडेर शनिबारको राष्ट्रपतिको कदमलाई गम्भीर रुपमा लिइएको बुझिन्छ ।
साभार हाम्रा कुरा डटकम बाट
Posted on: Monday, October 14, 2019 Time: 9:53:13